Yanjun Cheng dia manana fanomezana lehibe ho an'ny hosodoko nomerika | Famoronana an-tserasera
Ny fampiasana tsara ny loko amin'ity sanganasa nomerika nataon'i Yanjun Cheng ity
Omaly fotsiny dia naneho hevitra izahay ny fifandanjana lehibe amin'ny loko miloko ampiasaina amin'ny asa "Net" avy amin'i Igor Piwowarczyk rehefa manana ny fampahalalana izahay. Sary amin'ny sary hosodoko nomerika izay manamboatra izay zava-bita amin'ireo fitaovana ireo izay ahitantsika ny Photoshop mahafinaritra.
Ankehitriny isika dia afaka mifaly amin'ny sanganasa antsoina hoe "150325" nataon'i Yanjun Cheng, mpanakanto ao Boston izay mankamamy ny tenany teknika lehibe miloko araka ny hitanao amin'ny asany sisa, ankoatr'izay manjaka eto amin'ny lohan'ity lahatsoratra ity. Mpanakanto hanaraka avy any Behance ary manana tombana manokana ho an'ny saripika araka ny fahitanao azy.
Ankoatry ny fananana teknika tena tsara amin'ny loko, dia ny fiatrehana ny hazavana izay ahafahanao mampiseho an'io genius io izay ananany. Ilay hazavana tratra Amin'ireo famirapiratana sy aloka ireo rehefa "mikasika" ny sarin'ilay vehivavy izy, dia mendrika homarihina, ankoatry ny dikan'io fihetsika io sy ny paozy izay mitarika fientanam-po izay manenika ny mpijery izay mijery azy foana mandritra ny minitra vitsy.
Ireo mavo akaikin'ny volomparasy mitovy sanda aminy ary ny maintso miaraka amin'ny mena dia mitarika antsika amin'ny ohatra tsara amin'ny atao hoe fanjakazakana amin'ny teôria miloko izay tsy mora raisina amin'ny iray mba hahafahana mamadika azy amin'ny asa sy fanoharana samihafa.
Ny iray amin'ireo fahombiazany dia toy ny lasa saika mivoaka ny majika amin'ny toa ny maraina ho an'ny asa kalitao iray ary mitondra antsika mivantana any Behance. Rehefa tsindrio na tsindrio izany amin'ny findainao dia ho hitanao ny sanganasa hafa misy kalitao lehibe izay mahatalanjona ny sariny, indrindra ilay mpilalao sarimihetsika "León: ilay matihanina".
Mpanakanto hanaraka miaraka amin'ny fikitika manokana ny sary hosodoko nomerika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny fampiasana tsara ny loko amin'ity sanganasa nomerika nataon'i Yanjun Cheng ity
Rahoviana no tokony havaozina ny sary famantarana?